Vhura Sosi Foundation yakazivisa vanokunda veMahara Software Mipiro 2019 | Linux Vakapindwa muropa
Kumusangano weLibrePlanet 2020 iyo yakaitwa online gore rino nekuda kwegore rino coronavirus denda, mhemberero yemubairo yakaitwa kuzivisa vanokunda yeiyo Mahara Mahara Software Mipiro 2019.
Izvi ndizvo yakasimbiswa neFree Software Foundation (FSF) uye yakapihwa kuvanhu vakaita mupiro wakakosha mukuvandudza software yemahara, pamwe nehukama hwakakosha mapurojekiti. Zvinyorwa zveyeuchidzo netsamba zvakaunzwa pamhemberero zvakatumirwa kune vakundi.
Mubairo wekusimudzira nekusimudzira software yemahara wakapihwa Jim Meyering izvo chaizvo inotarisira kuchengetedza iyo GNU Coreutils zvinoshandiswa, iyo inosanganisira masevhisi eruzhinji senge mhuka, katsi, chmod, chown, chroot, cp, zuva, dd, echo, zita rezita, id, ln, ls, nezvimwe. Jim zvakare mumwe wevanogadzira mainotools uye musiki weGnulib, uyo akaita basa rakakura rekubatanidza iyo yakajairika kodhi kodhi yezvirongwa zveGNU
Mukusarudzwa award to mapurojekiti akaunza zvakanakira nzanga uye ndikapa mukugadziriswa kwematambudziko akakosha munharaunda, mubairo wakapihwa chirongwa cheNgatimbonyorai, iyo inotsigira nharaunda inodzorwa isingabatsiri chitupa nzvimbo uye inopa zvitupa zvemahara.
Ngatinyorwei zvine chirevo chakakura pakushanduka kubva paInternet kuenda mukushandiswa kwakawanda kwemigwagwa yakavharidzirwa paWebhu uye yakaita kuti HTTPS iwanikwe kune vese
Tichishandisa kunyorera, Ngatinyororei tikwanise kugadzirisa dambudziko raiita serisingagadzirisike nekuda kwekufarira kwekutengeserana muzvivakwa zviripo. Sekureva kwaJosh Aas, mukuru we Ngatisimbisei, rusununguko harugoneke pasina kuremekedza zvakavanzika. Sezvo hupenyu hwevanhu vazhinji huchitenderera pawebhu,
Muna 2020, paivewo nesarudzo nyowani yemupiro wakatanhamara we mutsva mutsva kune yemahara software yekuvandudza, iyo yakapihwa kune vanotanga, avo mupiro wavo wekutanga wakaratidza kuzvipira kwakasimba kune yemahara software kufamba.
Mubairo uyu wakagamuchirwa naClarissa Lima Borges, mudzidzi weinjiniya anobva kuBrazil, vakapinda muchirongwa cheKubuda kunze uye vanozviratidza pachavo mumunda wekushandisa kuyedza nemhando dzakasiyana dzekushandisa kweGnome.
Basa racho rakanangana nekugadzira yemahara software kuti ive nyore kune akasiyana siyana vanhu vanofanirwa kudzora zvizere mashandisirwo anoshandiswa uye yavo data.
Pakati pevakakunda kare, tinogona kuwana zvinotevera:
2018Deborah Nicholson, Dhairekita weRuzhinji Hukama paSoftware Rusununguko Conservancy.
2017Karen Sandler, Mutungamiriri, Software Freedom Conservancy.
2016 Alexandre Oliva, Brazilian popularizer uye yemahara software yekuvandudza, muvambi weLatin American Open Society Foundation, munyori wepurojekiti yeLinux-Libre.
2015 Werner Koch., musiki uye mutungamiriri anovandudza weGNU Yakavanzika Yekuchengetedza GnuPG Toolkit.
2014 Sebastien Jodogne, munyori weOrthanc, A Yemahara DICOM Server yeKusvikira Computed Tomography Dhata.
2013 Mateo Garrett, mumwe wevagadziri veLinux kernel, nhengo yeLinux Foundation technical kanzuru, uyo akaita mupiro wakakosha mukuona Linux boot pane masisitimu neEFI Yakachengeteka Boot.
2012 Fernando Perez, munyori weIPython, inoenderana ganda rePython mutauro.
2011 Yukihiro Matsumoto, munyori weRuby chirongwa chemutauro. Yukihiro ave achibatanidzwa mukuvandudzwa kweGNU, Ruby, uye mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti kweanopfuura makore makumi maviri.
2010 Rob Savoye, mutungamiri wepurojekiti mukugadzira yemahara Flash player Gnash, nhengo yekuvandudza yeGCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Tarisira, muvambi weOpen Media Zvino.
2009 John Gilmore, co-muvambi weElectron Frontier Foundation, mugadziri weanozivikanwa eecypherpunks tsamba yekutumira uye iyo Usenet alt musangano wevakuru vakuru. *. Muvambi weCygnus Solutions, yekutanga kambani kupa rutsigiro rwekutengesa kwemahara software mhinduro. Muvambi wema projekiti emahara Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP, uye FreeS / WAN.
2008 Wietse Venema (inozivikanwa nyanzvi mumunda wekuchengetedzwa kwemakomputa, musiki wemapurojekiti akadai sePostfix, TCP Wrapper, SATAN uye Iyo Coroner's Toolkit).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vhura Sosi Foundation yakazivisa vanokunda veMahara Software Mipiro 2019